Tanànan'i Cádiz izay tsy azonao adino | Vaovao momba ny dia
I Cádiz dia faritany iray be mpizahatany ary atoro. Tsy ao an-tanànany ihany no ahitantsika toerana hahavery tena, satria izy dia faritany iray izay ahitantsika tanàna maro izay manana firavaka Andalosiana tianay. Ao Cádiz dia afaka mahita morontsiraka na tendrombohitra azo isafidianana isika, miaraka amin'ireo tanàna tsara tarehy izay efa nanjary tandindona. Raha te hahafantatra lalina ity faritany ity isika dia tsy afaka tsy hahita ireo tanàna tsara tarehy ireo.
ny ny làlan'ny tanànan'ny Cádiz dia efa malaza, satria mampiavaka azy ireo ireo tanàna fotsy mahazatra fanta-daza izay toa natao ho karatra paositra ary azo tsidihina amin'ny faritra samihafa amin'ny faritany. Izany no antony ahitantsika ireo tanàna miavaka indrindra eto Cádiz izay tsy azonao adino raha mitsidika ny faritany ianao.
7 Ny Seranan'i Santa Maria
Ity, toy ny maro hafa, dia miorina amin'ny Làlan'ny tanàna fotsy any Cádiz izay mitondra antsika hamakivaky ireo tanàna mahazatra Andalosiana. Ity tanàna ity dia miavaka amin'ny hafa satria manana ny lalana Cuevas del Sol voalohany izy io izay nanoratako ireo trano tsy ho eny an-tendrombohitra, izay mbola manarona ny endriny amin'ny fomba tena tsy mampino. Sehatra misarika ny saina izy io, na dia feno mpizahatany te hahita ireo trano voalohany ity aza io arabe io. Azontsika atao ihany koa ny mandeha amin'ny Calle de la Sombra ary mahatratra ny Plaza de Andalucía. Ao an-tanàna dia afaka jerentsika ihany koa ny Torreón del Homenaje, izay sisa tavela amin'ny trano mimanda Almohad tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Farany, tsy maintsy mamporisika ny hitsangatsangana amin'ireo arabe feno trano fotsy nentim-paharazana ireo isika.
Ny tanànan'ny Conil de la Frontera taloha dia iray amin'ireo toerana tsy tokony hohadinoina ireo, miaraka amin'ireo trano fotsy feno fotsifotsy voaravaka hain-kazo, sary tena mahazatra izay tian'ny rehetra. Ity tanàna ity dia mpizahatany tokoa satria any amoron-tsiraka no misy azy ary tsara izany morontsiraka toa an'i La Fontanilla izay ahafahanao mankafy ny toetrandro tsara. Ity toerana ity koa dia tonga lafatra mba hanandramana ilay mena malaza avy amin'ny fandrika sy trondro nendasina ao amin'ireo trano fisakafoanana ao.
Ny lova goavana ao an-tanànan'i Medina Sidonia dia be dia be sy maro karazana. Ny fiangonana Santa María la Coronada dia manana endrika Gothic Renaissance miaraka amin'ny endrika amin'ny fomba Herrerian. Hitanay koa ny fiangonan'i San Juan de Dios na ny Hermesy an'ny Santos Mártires, izay zokiny indrindra ao Andalusia. Ny Andohalambon'i Betlehema no fidirana mankany amin'ny tanàna antonontany ary ny an'i La Pastora dia ho hitantsika ny varavarana Arabo. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ity firaketana taloha ity isika raha mitsidika ny Museum Ethnographic sy ny Museum ary ny arkeolojika Medina Sidonia. Any an-tampony, eo an-tampon'ny havoana, no ahitantsika ireo manda fiarovana an'ny sivilizasiona samihafa toa ny Roman Castellum na ny tranon'ny medieval.
Iray amin'ireo antsoina koa hoe White Towns dia Arcos de la Frontera. Afaka mankafy arabe mahafinaritra isika toa ny Callejón de las Monjas, toerana misy vato miaraka amin'ny Arcos de las Monjas tsara tarehy. Toerana iray hafa handehanana mitsangatsangana amin'ny trano mahazatra sy ireo arabe izay tsy ampoizina. Ny Plaza del Cabildo no afovoany indrindra ary ao no ahitantsika ny Lapan'ny tanàna, ny Parador ary ny fiangonan'i Santa María avy any Mudejar.
Chipiona dia tanàna amorontsiraka iray hafa izay miavaka amin'ny fananana fomba fiaina milamina. Mandehandeha eny amin'ny arabe sy manandrana ireo lovia mahazatra ao amin'ny barany dia zavatra iray tsy maintsy atao raha mitsidika azy isika. Fa tokony ho hitantsika koa ny Toerana masina an'ny Our Lady of Regla sy ny tranombakoka ao aminy. Tokony handeha ho any amin'ny hazavan'ny Chipiona ihany koa isika, izay avo indrindra any Espana ary iray amin'ireo avo indrindra eto an-tany. Raha ny marina dia afaka miakatra ianao fa tsy maintsy mamakivaky ireo dingana mihoatra ny telonjato izay ananany, ho an'ireo izay mety sy mazoto ihany.
Vejer de la Frontera dia manana tanàna antitra mahafinaritra iray hafa izay tokony hotsidihintsika. Our Lady of Oliva Street Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra, manodidina ny fiangonan'ny Mpamonjy Masina. Niorina tamin'ny moske taloha ity fiangonana ity ary niavaka tamin'ny tranobeny. Ny teboka manan-tantara iray hafa ao amin'ity tanàna ity dia ny Arco de la Segur tamin'ny taonjato faha-XNUMX, namboarin'ny Monarchs katolika ary manodidina anao dia afaka mahita ampahany amin'ny rindrin'ny tanàna ianao. Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba an'ity toerana ity ianao dia mila mankany amin'ny Vejer de la Frontera Museum izay hita ao amin'ny trano iray tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny Seranan'i Santa Maria
El Puerto de Santa María dia manakaiky ny tanànan'i Cádiz. Ao amin'ity villa ity no azontsika atao jereo ny taonjato faha-XNUMX Castillo de San Marcos. Mila mamaky ny Plaza de Cristobal Colón sy ny Plaza del Polvorista ianao ary hijery ny Basilica madinidin'ny vadin'ny fahagagana ataontsika. Ao amin'ny seranan-tsambo dia afaka mihinana trondro nendasina ianao ary mitondra sambo mankany an-drenivohitra Cádiz.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tanànan'ny Cádiz